उत्तर प्रदेशमा रेल दुर्घटना, ८ को मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
६ चैत, काठमाडौं । भारत उत्तर प्रदेशको रायबरेलीमा रेल दुर्घटना भएको छ ।
सहमति बिना संविधान बन्न सक्दैन : श्रेष्ठ
चैत ६ – एकीकृत नेकपा एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति बिना संविधान निर्माण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्री
वैद्यको कार्यालयमा दुई माओवादीवीच एकता वार्ता
८ चैत, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओेवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीबीच पार्टी एकताबारे आज छलफल हुँदैछ ।
मजदुरको माग सम्बोधन गर्न माथिल्लो तामाकोसी तयार
काठमाडौँ, चैत ८–माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण कार्यमा अवरोध गरिरहेका मजदुरलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
भारतले अम्पायरकै कारण जित्यो: बंगलादेशी प्रधानमन्त्री
८ चैत, एजेन्सी । ब‍ंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले अम्पायरको सहयोगमा भारतले आफ‍्नो टिमलार्इ पराजित गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
धमाकेदार इन्ट्री गरेर बलिउडबाट कसरी हराइन तनुश्री
बलिउड इन्डस्ट्रिमा पहिचान बनाउन लाखौं मानिस मुम्बइ धाउने गर्छन्।
सिंगापुरका राजनेता ली क्व‍ान यूको निधन
काठमाडौं ९ चैत , सिंगापुरका राजनेता ली क्व‍ान यूको निधन भएको छ। सोमबार सबेरै उनको ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
कागज उत्पादनमा नयाँ प्रविधि, उत्पादन क्षमता बढ्यो
म्याग्दी, चैत ९-म्याग्दीमा नेपाली कागज उत्पादनमा नयाँ प्रबिधिको प्रयोग भएको छ ।
संविधान निर्माणमा देखिएको अन्यौल चाँडो अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं, चैत ८ – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान कहिले बन्छ भन्ने अन्यौल चाँडो अन्त्य गर्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सदरमुकाममा ११ वर्षमा ४ पटक आगलागी,९५ घर जल्यो,अर्बौ रुपैयाँको क्षति
देवराज गुरुङ,ताप्लेजुङ चैत १० गते २०६० चैत १५ गते बेलुकी सदरमुकामस्थित विरेन्द्र चोकमा आगलागी हुँदा ४५ घर जल्यो ।
सरकार चार बुँदे माग पुरा गर्न प्रतिबद्धः गृहमन्त्रि
देवराज गुरुङ,रेडियो ताप्लेजुङ चैत १० गते आगलागीबाट भएको क्षति र आगलागी पिडितको अवस्था बुझ्न मंगलबार दिउँसो यहाँ आईपुगेका गृहमन्त्रि बामदेव गौतमले अग्नी पिडितको चार बुँदे माग पुरा गर्ने बचन दिएका छन् ।
आगोले जलेको तोक्मे बजार
देवराज गुरुङ,ताप्लेजुङ चैत १५ गते । नुनदेखि सुनसम्म किनबेच हुने तोक्मे बजार । क्षणभरमै (चैत ९) आगोले खरानी बन्यो ।
कुरा नमिलेपछि दलहरु बिच अझै दुरी
१६ चैत, काठमाडौं। सत्तापक्षले संविधानसभा बैठकसँगै वार्ता अघि बढाउने र विपक्षी मोर्चाले आन्दोलनलाई अझ उचाइ दिने निर्णय गरेपछि राजनीतिक गतिरोध झन् बढेको छ। सत्तारुढ र विपक्षीबीच आइतबार औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी भए पनि कुरा नमिलेपछि बैठक बस्न सकेन। दुई पक्षबीच भएका अनौपचारिक छलफलमा ५ जिल्लाका विवाद हल
७ चैत, काठमाडौ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै देशैभरका चिकित्सकहरुले मंगलवारदेखि रिले अनसन थाल्ने भएका छन्
अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीको मुख्यालयमा गोलाबारी, १ को मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) मुख्यालयको बाहिर गेटमा गोलाबारी हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ
बहराइनका श्रम बजार नियमन प्रमुख नेपालमा
२०७१ चैत्र १७ मंगलवार काठमाडौं : नेपालले बहराइनमा कामदार पठाउन तीनवटा मोडालिटीसहितको एजेन्डा तयार पारेको छ।
नझुक्किनु होला, आज ढाँट्ने दिन हो
१८ चैत, काठमाडौ । अंग्रेज वर्षको आज अप्रिल १ तारिख ।
विश्वभर पाँचसय भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड, एम्नेष्टीद्वारा भत्र्सना
काठमाडौं, चैत्र १८ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले विश्वमा मृत्युदण्ड दिने क्रम बढेको भन्दै यसको भत्र्सना गरेको छ ।
सासु बुहारीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला
रेडियो ताप्लेजुङ चैत १८ गते । नाङ्खोल्याङ्–३ की १५ वर्षिया बालिका झुमा विकको हत्यामा संलग्न नाङ्खोल्याङ–३ की २५ वर्षिया जुनु श्रेष्ठ र ४५ वर्षिया पद्मा कुमारी श्रेष्ठलाई चैत १६ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएको छ ।
कता जाँदैछ डा. केसीको अनशन?
१९ चैत, काठमाडौं । मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राख्दै ११ दिनदेखि अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई समर्थन गर्नेहरूको आकार बढिरहे पनि माग पूरा गर्न पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको आक्रामक दबाब शैलीको आलोचना हुन थालेको छ। आफ्ना माग पूरा गर्न चिकित्सकहरूले अपनाएको चिकित्सा सेवा बन्दको शैलीबाट डा. केसी आफै
आईसीसी अध्यक्ष मुस्तफाद्वारा राजीनामा
२०७१ चैत १८ गते अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीका अध्यक्ष कमाल मुस्तफाले राजीनामा दिएका छन् ।
बस दुर्घटनामा २१ को मृत्यु
२ चैत, बेइजिङ । दक्षिणपश्चिम चीनमा शनिबार १ सय मिटर गहिराईमा एक बस खस्दाँ २१ व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै अन्य ३ व्यक्ति घाइते भएका राज्यद्धारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
सूचनाकै कारण मुद्धामा ढिलाई
रेडियो,ताप्लेजुङ चैत २२ गते । न्याय सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी ढङगले प्रवाह गर्ने योजना भएपनि अदालतले भनिएकै मितिमा सवै मुद्धाको किनारा लगाउन सकेको छैन ।
आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा ठगिए भूपू गोर्खाहरु
चैत्र २२ । लन्डनस्थित विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने एक ब्रिटिस कम्पनीले भूतपूर्व तथा बहालवाला गोर्खा सैनिकहरुसँग शंकास्पदरुपमा ठूलो रकम उठाएको आशंकामा ब्रिटिस प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
चैत्र २२ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अहिले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा वार्ता भइरहेको छ ।
चैत्र २२ । चलचित्र ‘धुन’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । बैसाख १८ लाई रिलिज मिति घोषणा गर्दै निर्माण युनिटले चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो ।
एमाओवादी संविधान सभामा नजाने, सडकमा ६ माओवादीको प्रदर्शन
२३ चैत, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी आज बस्ने संविधानसभाको बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ ।
दाइजोको कुरा नमिल्दा दुलाहाले दुलही सहित १० जनाको ज्यान लिए
२३ चैत, पेसावर पाकिस्तानको उत्तरपूर्वी भागमा एक पुरुषले आफूले पहिले विवाह गर्न तय भएकी एक महिलाका साथमा निजका नौ नातेदारको हत्या गरेको जानकारी प्रहरीले आइतबार दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध ६ माओवादीको विरोध र्‍याली
चैत्र २३ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालिन घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिनू भनी गरेको फैसलाको विरोध गर्दै आएको एमाओवादीसहित ६ माओवादीले आज संयुक्त रुपमा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल टेलिकमद्धारा क्यानसँग तीन वर्षे सम्झौता
चैत्र २३ । नेपाल टेलिकमले नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि हातेमालो गर्ने भएको छ ।